Myanmar Actor Naing Naing and his wife Sandi Cho in United States of America | Myanmar Celebrity Couple Photos
Myanmar Actor Naing Naing and his wife Sandi Cho in United States of America
Naing Naing is staying in United States of America together with his wife at the moment. Naing Naing and his wife, Sandi Cho left Myanmar on 2nd March, 2009 for visiting to United State of American where Sandi Cho's parents live. This trip to US is the very first time for Naing Naing since he got marriage with Sandi Cho. Actor Naing Naing has starred for Singer Zen's Music Video VCD in New York, US.
Myanmar Actor, Naing Naing and his wife, Sandi Cho in Hollywood
သရုပ်ဆောင် နိုင်းနိုင်းရဲ့ ဇနီး စန္ဒီချိုတို့ အမေရိကားမှာ ရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးတွေပါ။ အဆိုတော် ဈာန်ရဲ့ သီချင်းဗီဒီယိုခွေအတွက် နိုင်းနိုင်းက နယူးယောက်မြို့မှာ သရုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ သရုပ်ဆောင် နိုင်းနိုင်း တယောက် ဇနီးဖြစ်သူစန္ဒီချိုနဲ့ အတူ အမေရိကန်နိုင်ငံကို မတ်လ ၂ ရက် ကထွက်ခွာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်းနိုင်းက စန္ဒီ နဲ့လက်ထပ်ပြီးကတည်းက ဒါပထမဆုံးအကြိမ် လိုက်သွားဖြစ်တာပါ။ နှစ်လ သုံးလ လောက်ကြာမယ် လို့သိရပါတယ်။